April 2016 – Gentleman Magazine
ယမကာ၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ အရက်သောက်ခြင်းက သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး၊ ကိုယ်ခန္ဓာ အလေးချိန်ကို ကျစေနိုင်တယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်။ တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတဲ့ စကားကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒီလိုပါပဲ အရက်ယမကာတွေမှာလည်း အံ့အားသင့်စရာ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးအချို့ရှိပါတယ်။ ၀ိုင်၏ အကျိုးကျေးဇူးများ ၁။ ၀ိုင်အနီရောင်က အဆီပိုတွေကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။
ရင်းနှီးငွေအနည်းငယ်နဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်နိုင်ဖို့ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်အများစုမှာ ထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးစိတ်ကူးတွေ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုံလောက်တဲ့ ကနဦးရင်းနှီးမတည်ငွေမရှိတဲ့အတွက် စိတ်ကူးကို အကောင်အထည်ပေါ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကူးကောင်းရှိပြီး ငွေမရှိဘူးဆိုတိုင်းလည်း သင့်ကို ရပ်တန့်မသွားစေဖို့အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ဖို့ စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုကို အရင်းအနှီးအနည်းငယ်နဲ့ စတင်တည်ထောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်(၈)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။
အရပ်အမြင့်နှင့် ချစ်သူရွေးချယ်မှုအကြားက ဆက်စပ်မှု
အရပ်အမြင့်နှင့် ချစ်သူရွေးချယ်မှုအကြားက ဆက်စပ်မှု လက်ရှိ သင့်ရဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်၊ ဆံပင်အရောင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ မျက်လုံးအရောင်စတာတွေ အားလုံးကို သင့်ရဲ့ မျိုးဗီဇက သတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မျိုးဗီဇတွေထဲမှာ သင့်ရဲ့အရပ်အမောင်းကို ထိန်းချုပ်တဲ့ မျိုးဗီဇနဲ့ ကြင်ဖက်ရွေးချယ်တဲ့ မျိုးဗီဇနှစ်ခုတို့ဟာ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ စုံတွဲပေါင်း ၁၃၀၀၀ ကျော်ကို
သိရှိထားသင့်တဲ့ လိင်မှုကိစ္စ အသိပညာများ
သိရှိထားသင့်တဲ့ လိင်မှုကိစ္စ အသိပညာများ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှား ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အရေးကြီးကိစ္စနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စနှစ်ခုကတော့ လိင်မှုပညာပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ လိင်မှုကိစ္စကို ရှက်စရာလို့ အမြဲတမ်းယူဆထားတာဟာ အားလုံးကို ရှုပ်ထွေးသွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ လိင်မှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုနောက်ပိုင်းမှာ လက်မထပ်ရသေးပဲ လုံးဝမကျူးလွန်ဖို့ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် တားမြစ်ပိတ်ပင်တာမျိုးထက် ကိုယ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုအတွက် တာဝန်ယူနိုင်ဖို့ အပြောများလာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
သူမ သင့်ကို ကြွေနေကြောင်း လက္ခဏာ ၁၀ ခု
သူမ သင့်ကို ကြွေနေကြောင်း လက္ခဏာ ၁၀ ခု သင် သူမကို သံယောဇဉ် ရှိနေသလို ခံစားနေရပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဆက်နွယ်မှု ရှိပြီး ဇာတ်လမ်းလေး စကြည့်ချင်ပါတယ်။ သူမကို သင် ရည်းစားစကား စပြောသင့်တာ ဘယ်ချိန်မျိုးမှာပါလဲ?? သင့်ကို သူမ ကြွေနေကြောင်းပြတဲ့ လက္ခဏာ
အသက်(၃၀)မတိုင်ခင် လုပ်ဖူးသင့်သည့် အရာများ
အသက်(၃၀)မတိုင်ခင် လုပ်ဖူးသင့်သည့် အရာများ ၁။ အလုပ်ထုတ်ခံရဖူးပါစေ။ အလုပ်ထုတ်ခံရတာက ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘ၀အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြောင်းအလဲလုပ်ဆောင်ဖို့ အသိစိတ်ကို နိုးကြားစေပါတယ်။ အသက်(၂၀)ကျော် အရွယ်မှာ အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတာဟာ မှားယွင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ကိုလုပ်နေမိလားဆိုတာကို ပြန်ဆင်ခြင်နိုင်စေပြီး အရံအစီအစဉ်တွေထားရှိလုပ်ဆောင်တတ်စေဖို့ အရည်အချင်းတွေကို ဖွံ့ဖြိုးလာစေပါတယ်။ ၂။ အဆင်မပြေတဲ့အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်ပါ။ ဘ၀က
ငွေသုံးနည်း 70/30 စည်းမျဉ်း
ချမ်းသာစေသော ငွေသုံးနည်း(၃)ချက် ခမျြးသာစသေော ငှသေုံးနညျး(၃)ခကျြ ဘာလို့ အလုပ်ပဲ အမြဲလုပ်နေရပြီး ကံတရားကမျက်နှာသာမပေးသေးတာလဲ။“ချမ်းသာဖို့ အလုပ်လုပ်နေတာကွ။ရှာသမျှပိုက်ဆံက ဘာလို့ခဏနဲ့ကုန်သွားရတာလဲ“လို့ရော တွေးဖူးပါသလား။တွေးဖူးတဲ့သူတွေအတွက် ချမ်းသာဖို့ ငွေကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနည်းလေးဝေမျှပါရစေ။ 70/30စည်းမျဉ်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ အလုပ်အတွက် လိုအပ်တဲ့အခွန်အခတွေ ကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက် သုံးပြီးကျန်တဲ့ငွေ(အမြတ်ငွေ)ရဲ့ 70%နဲ့ ကိုယ့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေကို
ချစ်သူကို အလေးထားကြောင်းဖော်ပြနိုင်မည့် နည်းလမ်း (၇)ခု
ချစ်သူကို အလေးထားကြောင်းဖော်ပြနိုင်မည့် နည်းလမ်း (၇)ခု ခဈြသူကို အလေးထားကွောငျးဖျောပွနိုငျမညျ့ နညျးလမျး (၇)ခု ၁။ သူမဖက်က အသိအမှတ်ပြုမပြုကို မေးပါ။ အမျိုးသားတွေက အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေနေတယ်လို့ပဲ များသောအားဖြင့် ယူဆထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဇနီးလုပ်သူက ကွာရှင်းခွင့်တောင်းတဲ့အခါကျမှ အံ့အားတသင့်ဖြစ်ကြရတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးသုခအကြားမှာ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး
ကျရှုံးမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရစေမည့် အမူအကျင့်(၅)ခု
ကျရှုံးမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရစေမည့် အမူအကျင့်(၅)ခု ကရြှုံးမှုနဲ့ ရငျဆိုငျရစမေညျ့ အမူအကငျြ့(၅)ခု သင့်ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေက သင့်ဘ၀ကို အဓိပ္ပါယ်ဖော်ဆောင်နေပါတယ်။ သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကပဲ သင်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကို ပုံဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဘယ်လိုပဲကြိုးစားပါစေ၊ ကျဆုံးမှုဆိုတာကို ကြုံတွေ့လာရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုကျဆုံးမှုနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာ လက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်ဖို့ မတွေးပါနဲ့။ အခက်အခဲဆိုတာ အမြဲတမ်းရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းက ကျရှုံးမှာကို စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။
သင်မသိသေးတဲ့တစ်မိနစ်အတွင်း ကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာစေမည့် နည်းလမ်းများ
တစ်မိနစ်အတွင်း ကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာစေမည့် နည်းလမ်းများ တဈမိနဈအတှငျး ကနျြးမာရေးပိုကောငျးလာစမေညျ့ နညျးလမျးမြား ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် တစ်ဘ၀လုံးကို သတိပြုဆင်ခြင်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ အခုကစပြီး အချိန် (၁)မိနစ်အတွင်းမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စွာ နေထိုင်နိုင်စေဖို့ နည်းလမ်း(၂၁)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ HDL ကိုလက်စထရောဓာတ်မြင့်တက်စေမည့် စားစရာများစားပါ။ လေ့လာမှုတွေအရ တစ်နေ့ကို အငံမပါတဲ့
အောင်မြင်ချင်ပါသလား?? သူတို့ကို နားမထောင်ပါနဲ့ အောငျမွငျခငျြပါသလား?? သူတို့ကို နားမထောငျပါနဲ့ တစ်ချိန်တုန်းကဆိုရင် ကျွန်တော်ဟာ အတိုင်ပင်ခံတွေထားပြီး ဒေါ်လာ သောင်းပေါင်းများစွာ သုံးပြီးတော့ သူတို့ပြောတဲ့ ” အောင်မြင်မှု လမ်းမှန်” ကို သွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က တခြားသူတွေ သွားခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ပြောပြတာပါ။ တခြားသူတွေလို ကြော်ငြာပါတယ်။
မိန်းမတွေ လက်ခံထားတဲ့ ရင်သားတွေအကြောင်း လျှို့ဝှက်ချက် လေးသွယ်